घुस्याहा लेखा अधिकृत जोगाउन कार्यालय प्रमुख लबिंग गर्दै – NewsAgro.com
घुस्याहा लेखा अधिकृत जोगाउन कार्यालय प्रमुख लबिंग गर्दै
February 17, 2018 February 18, 2018 newsagro0Comments घुस्याहा लेखा अधिकृत जोगाउन कार्यालय प्रमुख लबिंग गर्दै, पशुपन्छी बजार प्रबद्धन निर्देशनालय, पशुपन्छी बजारका लेखा अधिकृत भेटिए एक लाख घुससहित, लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाँई
यो समाचार 869 पटक पढिएको
काठमाडौं । पशुपन्छी बजार प्रबद्धन निर्देशनालयको अनियमितता बारे गतहप्ता न्युज एग्रो डट कमले समाचार प्रकाशित भए पछि त्यसले निकै तरंग ल्याएको छ । उक्त कार्यालयमा हुने गरेका थप अनियमितता पनि खुल्न थालेको छ ।
कार्यालयका लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाँईले सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । बजगाँईले आफूले पाउनु पर्ने कमिसन रकम नपाएको भन्दै सेवाग्राहीलाई ताकेता गरेपछि एक सेवाग्राही उनको कार्यालयमा पुगेका थिए । कमिसनको एकलाख बुझेपछि बजगाँइले क्याल्कुलेटर थिच्दै आफूले पाउनुपर्ने बाँकी ८ हजार रकम छिट्टै चाहियो भनेर माग गरेका छन् । (लेखा अधिकृत नगद एक लाख घुससहित फेला परेको हेर्नुस् तस्विरमा)
कमिसन रकम घुस लिएपछि उनको कार्यालयमा न्युज एग्रो डट कमको टोली पुगेको थियो । बुझेको रकम देखाउन आग्रह गरेपछि उनले घर्राबाट एक लाख रकम झिकेका थिए । त्यो क्षणको प्रमाण फेला परेको सुँइको पाएपछि उनले आफूलाई बचाइदिन हारगुहार गरेका छन ।
उनको बदमासीबारे जानकारी गराउन कार्यालय प्रमुख डा. बलराम थापालाई टेलिफोन गर्दा उनले आफू चितवन पोर्क फेस्टिभलमा जान लागेको भन्दै फर्केपछि कुरा गर्ने बताएका थिए । उनी फर्किएपछि प्रतिकृयाका लागि उनको कार्यालयमा पुग्दा लेखा अधिकृतले गलत गरेको स्वीकारेको सुनाउँदै एकपटकका लागि छाडिदिन आग्ह गरेका थिए । लेखा अधिकृतले गलत निर्णय लिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै समाचार प्रकाशित नगरिदिन थापाले आग्रह गरेका थिए ।
जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेझैँ गतहप्ता प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर कार्यालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. बलराम थापाले कार्यालय मर्यादा नाघेर विभिन्न हर्कत गर्दै आएका छन् । प्रतिशोध साँध्न उनले पत्रकारका विरुद्ध सरकारी पत्र नै बाँड्दै हिडेका छन्, जुन कार्यालय मर्यादाको उल्लंघन हो । तथ्यहीन र निराधार आरोप लगाएर उनले आफ्नो कार्यालयको वदमासी लुकाउने चेष्ठा गरेको प्रष्ट छ ।
समाचार बाहिरिएपछि अत्तालिएका थापाले लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाँईको संरक्षणका लागि गरेका पहलको समेत खुलासा भएको छ । उनकै मिलिभगतमा लेखा अधिकृतलाई च्यानल मिलाएर रोल्पामा काज सरुवा गरिएको छ । घुस लिएको प्रमाणसहित समाचार आउने डर पछि लेखाअधिकृतले मोवाइल स्वीच अफ गरेर कैयौं दिन कार्यालय समेत गएका थिएनन् । लेखा अधिकृत कार्यालयको सम्पर्कमै नरहेको प्रतिकृया दिएका थापाले उनको विदा स्वीकृत गरेको तथ्य लुकाउन खोजेका थिए ।
कार्यक्रम निर्देशक थापा र लेखा अधिकृत बजगाँईको मिलेमतोमा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिका थप प्रमाणहरुको पुष्टि गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।
बजगाँईले आफूलाई जोगाउन नसके कार्यक्रम निर्देशकलाई समेत अफ्ठेरोमा पार्ने धम्की दिएका थिए । थापाले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीको नाम समेत मुछेर बजगाँईलाई एक पटकका लागि माफी दिन सचिवले आग्रह गरेको प्रतिकृया दिएका थिए । उनले सचिव समेत लेखा अधिकृत बजगाँईको पक्षमा उभिएका दावी गर्दै एकपटकका लागि माफी दिने वातावरण बनाउन सचिवले आग्रह गरेको भन्दै लेखा अधिकृतलाई जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
एक प्रसंगमा थापाले अनुदानग्राही महिलालाई आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै त्यसलाई मिलाउन आफूलाई हम्मे परेको समेत खुलाएका थिए ।
पूर्व सचिव डा. युवकध्वज जिसीले समेत अनुदानको रकममा आँखा लगाएको भन्दै प्रमुख थापाले सरकारी काममा हुने अनियमितता सामान्य भएको भन्न समेत पछि परेनन् । उनले आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी अनियमिततामा संलग्न भएको दावी गर्दै मातहतका कर्मचारीको बचाउ गरेका छन् ।
पशुपन्छी बजार प्रबद्धर्न निर्देशनालयमा गत आर्थिक बर्षमा वितरण गरेको अनुदान रकममा समेत कार्यक्रम निर्देशक र लेखापालको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टी हुने आधार प्रमाणहरु छन् ।
बजार प्रबद्धन निर्देशनालयको स्वीकृत कार्यविधिको परिच्छेद ३ को बुँदा नंं. ५ को (ग) मा स्पष्ट लेखिएको छ– बुँदा ५ (ख) मा उल्लेखित सम्बन्धीत निकायको शिफारिस भन्नले पशुपंक्षी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालय र क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयको प्रस्ताव आव्हानमा सम्बन्धीत जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको सिफारिस र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको प्रस्ताव आव्हानमा सम्बन्धित सेवा केन्द्रको सिफारिस भन्ने बुभिलने छ । (हेर्नुस् कार्यबिधिको पृष्ठ ६)
गत आबमा त्यस निर्देशनालयले अनुदान वितरण गर्दा काठमाडौं जिल्लामा ३० लाख र दशलाख गरी नौ वटा मिट मार्टको लागि अनुदान दिएको रेकर्डमा देखिन्छ तर जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा भने ४ वटालाई मात्र भुक्तानी सिफारिस गरेको भेटिन्छ ।
विश्वस्त स्रोतकाअनुसार कार्यक्रम निर्देशक थापाले प्रकृया र पूर्वाधार नपुगेका ५ वटा मासु पसलेलाई कमिसनको भरमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखलाई समेत थाहै नदिई सेवा केन्द्रका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई निर्देशनात्मक शैलीमा सिफारिस लेख्न लगाएका थिए । पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयको अनुदान प्रस्तावको हकमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको सिफारिस अनुदान रकम भुक्तानीको लागि बाध्यकारी मानिन्छ ।
अझ रोचक त के छ भने ललितपुर जिल्लामा अनुदान प्राप्त गरेका विभिन्न किसिमका साझेदारीहरुको कार्य सम्पन्न सिफारिस समेत छैन। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय ललितपुर द्धारा पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयमा प्राप्त पत्रमा कार्य सम्पन्न नलेखी हालसम्म भए गरेका कामको विवरण उल्लेख छ। स्मरण रहोस् सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले कार्य सम्पन्नताको सिफारिस नगरेसम्म भुक्तानी दिन पाईदैन ।
व्यावस्थित मिट मार्ट संञ्चालनको लागि कार्यविधिको पृष्ठ २८ मा स्पष्ट लेखिएको छ– मिट मार्टमा कोल्डरुम रहनु पर्ने छ । अनुसूचि १२ को दफा २४ (झ) मा मासु पसलको स्वरुपको नक्साको डिजाईन समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसमा चिस्यान समेतको भण्डार कक्षलाई समावेश गरिएको छ । (हेर्नुस् कार्यबिधिको पृष्ठ २८)
अनुचित लाभ लिन लिप्त कार्यालय प्रमुख थापा र लेखा अधिकृत बजगाँईको मिलेमतोमा कोल्डरुम नबनाएका अनुदाग्राहीलाई बिल बनाएर ल्याएको भरमा अनुदान दिएको रेकर्ड हेर्दा थाहा लाग्छ ।
कोल्डरुम मात्र हैन मासु व्यावसायीले आफूले बर्षौ पहिलेदेखी संञ्चान गरेको पसलको संरचना तथा प्रयोग गरिरहेका सामानको नै पुनः बिल देखाएर अनुदान रकम भुक्तानी दिने प्रचलन नै बसाएका छन् । भएकै पुराना सामानलाई देखाएर किर्ते बिलका भरमा पसल चलाएर अनुदानप्राप्त भन्दै फलेक्स बोर्ड टासेका पसल करिब ९० प्रतिशत रहेका स्वयं व्यवसायीहरु स्वीकार्छन् ।
कार्यालयमा संकलित किर्ते बिलका विवरण र अनुदानबाट खुलेका पसलका सामान जाँच गर्दा कतिसम्म मिलेमतोमा काम भएको छ भन्ने प्रष्ट हुनेछ । त्यो अनुगमन र नियमन गर्न विभागीय सचिव र महानिर्देशकलाई हामी आग्रह समेत गर्न चाहन्छौं ।
यो समाचार पनि पढ्नुस :
← कफीको सय बोट रोप्नुस, नगद १० हजार पाउनुस !
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलपत्र →
एघार महिनामै नौ खर्बको आयात, स्वदेशी बस्तु ६८ अर्बको निर्यात, ६९ अर्ब ४१ करोडको कृषिजन्य बस्तु आयात